Raad Raac News Online – Daawo: Banaanbaxii Ururka Horseed Ee Gaalkacyo Oo Ku Dhamaaday Rabshado iyo kala Carar (Sawiro iyo Filim Dhamaystiran)
Daawo: Banaanbaxii Ururka Horseed Ee Gaalkacyo Oo Ku Dhamaaday Rabshado iyo kala Carar (Sawiro iyo Filim Dhamaystiran)
Bosaso Office June 29, 2013 1
Xilli Maanta Urur Siyaadeed Horseed Xafiiskiisa Gaalkacyo uu doonayay in uu bilaabo olole u ku doonay In uu ku kasbado shacabka dagan Magalada Gaalkacyo ayaaa markii ay masuuliyiinta Urur siyaadeed Horseed ee Gobolka Mudug ay bilaabeen qudbadaihii ay ugu tala galeen in ay u jeediyaan taageerayaasha Ururka ayaa jawiga waxaa uu noqday mid wax badan iska badalay kadib markii shacab ka soo horjeeda Horseed ay dhagaxaan kula ceyriyaan taareerayaasha Ururka oo ku sugnaa Goobta
Jawiga Waa uu Wanaagsanaa markii ay qudbadaha ay jeedinayeen Masuuliyiinta Horseed u qaabilsan balse xaalka ayaa markii dambe noqday mid isku badalay Rasasa Xoogan Oo Kor Loo Ridayay Taasi Oo Cabsi Xoogan ay ka muujiyeen dadkii ku sugnaa Goobta.
Astaamaha Horseed oo uu ka dhex muuqdo Sawirka Madaxweynaha Puntland ayaa Bartamaha magaalada lagu Gubay waxaana sidoo kale qashqashaad loo gaystay Gadiid ay ku rakibnayeen codbaahiyaal kuwaaso dhex marayay Gudaha Magaalada.
Isku soo baxi maanta ayaa waxaa hogaaminyaya Duqa Dagmada Gaalkacyo Col Axmed Cali salad masuliyiin ka tirsan Urur Horseed iyo ciidmada Birmadka ee Gobolka mudug, inkastoo markii dambe buuq xoggan oo is qabsaday lagu kala cararay
Qaar ka mid ah dadkii hor yimid dibad baxaasi ayaa sheegay in ay ka soo horjedaan ururka horseed iaydoona la arkayay Dadkaasi oo Markii Dambe Meesha Foodo iyo kala Carar ku riday.
Masuuliyiin ka Tirsan Laamaha Amaanka ayaa sheegay in ay u siman yihiin Urur siyaasadeedyada ka jira deegaanada puntland iyagoona ugu baaqay shacabka in ay ka shaqeynaan laamaha amaanka.
Waa Ururki ugu Horeeyey ee Maanta Fagarayaasha Gaalkacyo lagu arkayay iyagoo lagu Gelbinayay Tikniko.
Inkastoo arrintan ay Maanta ka qabsatay Gaalkacyo ayaa Haddana waxaa Isu soo baxa Horseed uu si wanaagsan oo bila Buuq ah uga qabsoomay Magaalada garoowe ee Xarunta Puntland iyo Magaalo Xebeedda Boosaso.
Ururada Siyaasadda oo Bilaabay Inay Olalahooda u Adeegsadan Halkaan ka Akhriso Warbixin Xiiso leh oo arrintaas ku Saabsan
Filimka oo tusaale ka bixinaya sida ay wax u dhaceen Maanta ayaa muujinaya in Dadka Qaarkii ay ka soo horjedaan madaama aysan jirin ama ka muuqan Goobta Dad ka celinaya.
Filimka ayaa muujinaya Gudoomiyaha Degmada oo Goobta lagala Cararay markii Rasaas ay dhacday foodana loo bedelay Xafladii taaso ay barbar socoto Weerar lagu qaaday Gadiidka ay Codbaahiyaasha ku xirnayeen.